Malagasy guitar masters : tarika mpilalao gitara ranofotsiny | NewsMada
Na tsy misy ifandraisany loatra amin’ny fetin’ny mpifankatia aza, azo lazaina ho fotoana hifampizarana ny kanto sy ny tsara indrindra ny fampisehoana etsy amin’ny Alliance française etsy Andavamamba (AFT), anio hariva. Hiavaka amin’ireo hetsika samihafa hitranga amin’ity faran’ny herinandro ity io.
Tsy inona moa izany fa ny kaonseritra gitara iarahana amin’ireo kalaza telo mirahalahy: i Teta, Chrysanto Zama ary Joël Rabesolo. Tarika misalotra ny anarana hoe : Malagasy guitar masters, izay tantanin’i Tao Ravao eo amin’ny lafiny artistika. Araka izany, ny mifanakaiky amin’ny tonga lafatra amin’ny fifehezana ny fitendrena gitara sy ny feo kanto entin’izany no hanenika ny efitrano malalak’ity foibe ity.
Tetikasa maharitra sy mametraka vina ny Malagasy guitar masters. Ankoatra ity fampisehoana ity, andalana ny fandraisam-peo, izany hoe, efa misy ny vokatra. Eo koa ny fitetezam-paritra, izay antenaina fa hipaka hatrany ivelany any.
Raha tsiahivina, samy matevina ny traikefa ananan’izy telo mirahalahy ireto eo amin’ny tontolon’ny fitendrena gitara. Singanina amin’ny lalana nodiavin’i Teta, ohatra, ny nandraisany anjara tamin’ny « Prix musiques de l’océan Indien ». Anisan’ny andrin’ny Ny Malagasy Orkestra, efa malaza any ampitan-dranomasina any, i Chrysanto Zama, raha toa ka ny tontolon’ny jazz no tena ahafantarana an’i Joël Rabesolo. Midika izany fa hanan-karena fifangaroana gadona ny mozika entin’izy telo lahy.